सूर्य को Windows मा सुरक्षा फिलिम। प्लास्टिक Windows देखि सुरक्षा फिलिम हटाउँदै?
प्लास्टिक Windows हेरविचार को आवश्यक नियम पालना गर्न आफ्नो सञ्चालनको मार्गमा भने, लामो समय को लागि प्रभावकारी हुनेछ। यो आफ्नो दीर्घायु सुनिश्चित गर्न मात्र होइन, तर आफ्नो सौंदर्य कायम राख्ने गर्दा पनि, हावा, चिसो, धूलो, चिस्यान र हल्ला बाट विश्वसनीय सुरक्षा छ मौका प्रदान गर्नेछ।
यो सुरक्षा फिलिम प्लास्टिक बक्स मा आफ्नो गुणस्तर र उत्कृष्ट उपस्थिति सुनिश्चित गर्न गतिविधिहरु अभिन्न भाग हो। यो कार्य को एक किसिम प्रदर्शन, एक जटिल उच्च प्रविधी उत्पादनहरु छ।
सुरक्षा फिलिमहरु को प्रकार
फिल्म उद्देश्य आधारमा धेरै प्रकार विभाजन गरिएको छ। तिनीहरूलाई प्रत्येक उच्च गुणवत्ता सामाग्री को विशेष उपकरण मा छन्। उत्पादन प्रविधिलाई - एक प्रक्रिया, धेरै चरणमा मिलेर फिल्म एक multilayered संरचना छ, र प्रत्येक प्रकार यसको तहहरू आफ्नो विशेष रासायनिक संरचना अलग देखि।
खिडकियों मा सुरक्षा फिलिम, समाप्त विन्डो उत्पादनहरु लागू हुन्छ जो, परिवहन र स्थापना को समयमा क्षति तिनीहरूलाई सुरक्षित राख्छ। Windows को स्थापना पछि तपाईं यसलाई मेटाउन चाहन्छु।
यस्तो फिलिम पनि त्यहाँ प्लास्टिक ग्लास Windows मा थप चिपके ती छन्। तिनीहरूले ग्लाजिंग, यांत्रिक क्षति र gusts तिनीहरूलाई रक्षा सुरक्षा प्राप्त र प्रतिरोध असर, साथै एकदम ग्लास मार्फत गर्मी हानि कम।
फिलिमहरु को अर्को प्रकारको यो संभव इन्फ्रारेड र पराबैंगनी विकिरण, साथै Windows मार्फत प्रवेश देखिने प्रकाश को डिग्री समायोजन बनाउँछ।
साथै, त्यहाँ पनि यस्तो प्रकार, Windows मा एक सुरक्षा फिलिम, उच्च pozharoprochnostyu द्वारा विशेषता रूपमा छ। यो आगो फैलिन रोक्छ र एक कोठा सुरक्षित क्षेत्र खेल्छ।
समयमै को सुरक्षा फिलिम को Windows को स्थापना पछि हटाउने
प्लास्टिक विन्डो स्थापित भएपछि, तपाईंले आफ्नो प्रभावकारी संचालन सुनिश्चित गर्न उपाय एक श्रृंखला प्रदर्शन गर्नुपर्छ। यो मुख्यतया सम्पूर्ण संरचना कवर सुरक्षा फिलिम निष्कासन भन्छिन्।
यो सुविधा, सामान्यतया फिल्म मा नै प्लास्टिक Windows देखि सुरक्षा फिलिम हटाउन रूपमा दिइएको विवरण लागि निर्माता निर्देशन locates। सामान्यतया, यो तुरुन्तै विन्डो स्थापना पछि गरिन्छ। र ग्लास, प्लास्टिक फ्रेम, विन्डो sashes, ढलान, विन्डो sills र प्रवाह संग गोली।
फिल्म हटाउन कस भने भविष्यमा यो थप कठिनाइ उत्पन्न हुनेछ। यो फिल्म विन्डो संलग्न छ जो संग टास्ने, गहिरो प्लास्टिक मा भित्र पस्नु कि गर्न सक्नुहुन्छ, र सफाई पारंपरिक एजेन्ट लागू गरेर को हटाउनु तथ्यलाई कारण छ, यो सजिलो हुनेछ। यो सुरक्षा फिलिम हटाउन ढिलाइ र तथाकथित बारेमा अफवाहहरु को उद्भव योगदान "फोहोर परमवीर चक्र प्रोफाइल।"
आफ्नै सुरक्षा फिलिम हटाउँदै?
यो प्रक्रिया पूरा गर्न आफ्नै निर्णय नगर्ने ती कि यस्तै सेवाहरू प्रदान सफाई कम्पनी लागू हुन सक्छ। तपाईं आफैलाई गर्न छैन कसरी प्लास्टिक Windows देखि सुरक्षा फिलिम हटाउन निश्चित चाहनुहुन्छ भने, तर, तपाईं सरल निर्देशन हुनेछ।
आवश्यक हुनेछ फिल्म हटाउन:
ग्लास-माटोको प्लेट सफाई को लागि एक खुरचनी;
हेयर ड्रायर भवन।
45 ° को फिलिम खोक्रो ब्लेड कोण ट्रिम र किनारा खींच सतह देखि अलग गर्न थाल्छ। यसलाई हटाउन भने छैन वा सानो टुक्रा मा भताभुङ्ग, त्यसपछि प्रयोग , निर्माण hairdryer अलिकति उनको नरम। यो खुरचनी को किनारा अप उठयो जब Windows मा सुरक्षा फिलिम धेरै सजिलै विभाजित गरिनेछ। यस मामला मा, प्लास्टिक गर्न क्षति को likelihood न्यूनतम कम छ, र सारा प्रक्रिया धेरै छिटो छ।
एक प्लास्टिक विन्डो संग गोंद सफाई को प्रभावकारी विधि
त्यसैले तपाईं कसरी Windows देखि सुरक्षा फिलिम हटाउन बाहिर समझ गर्नुभएको छ, र सफलतापूर्वक यो चरण पूरा भयो। अब यो तिनीहरूबाट टास्ने को remnants हटाउन रहनेछ।
तपाईं प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ कपडा (Microfiber) Soapy पानी भिगो। निस्तब्धता बाहिरी कवर प्लास्टिक विन्डो राख्न धेरै चरणमा ध्यान सञ्चालन गरिएको छ। प्रकाश विलायक वा प्लास्टिक Windows «Cosmofen» लागि विशेष सफाई स्प्रे - यदि Soapy पानी Washes टाढा खराब गोंद, तपाईं अझ प्रभावकारी माध्यम प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
विशेष संरक्षक - गर्मी सुरक्षा
अतिरिक्त सुविधा आवास, प्लास्टिक Windows संग सुनिश्चित गर्न, तपाईंलाई एउटा विशेष फिलिम पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरूले विभिन्न उपभोक्ता विशेषताहरु र प्रयोग सजिलो संयोजन। यस प्रकारको को Windows मा सुरक्षा फिलिम, एक हात मा, मजबूती खरोंच देखि ग्लास सुरक्षा र अन्य मा, क्षति को मामला मा ग्लास को shards उडान देखि चोट को जोखिम कम, यसको राम्रो बलियो बनाउँछ। साथै, यी चलचित्रहरू एकदम विन्डो मार्फत कोठा बाट गर्मी हानि कम गर्न।
सामान्यतया, यी बेरंग चिन्तनशील polyurethane वा polystyrene फिलिम, वा बेरंग पलिमर को एक पत्र संग लेपित Metallized Mylar आधार को उत्पादनहरु समावेश गर्नुहोस्। धातु चढाना (चाँदी वा कांस्य) एक आधार फिलिम समर्थित, कोठा मा सिधै गर्मी विकिरण प्रतिबिम्बित गर्न सक्षम छ जो एक सतह प्रदान गर्दछ।
यस प्रकारको (चिन्तनशील) को चलचित्रहरू मात्र बेरंग तर पनि Tinted छन्। यस मामला मा, सुरक्षा कोटिंग यसलाई आधार रंग भएपछि फिल्म लागू गरिएको छ।
विशेष सुरक्षा फिलिम - रोशनी नियन्त्रण
एक विन्डो मार्फत कोठा प्रवेश सूर्यका राशि विनियमित गर्न, सूर्य देखि Windows मा एक विशेष Tinted सुरक्षा फिलिम प्रयोग गर्नुहोस्।
यो इन्फ्रारेड र पराबैंगनी विकिरण र देखिने घामको लागू हुन्छ। विन्डो मार्फत कोठा मा रही, यस्तो विकिरण भित्री मन्दहोता र वालपेपर, साथै गर्मी यसको गर्मी योगदान।
को दर्पण सहित यस प्रकारका Tinted फिलिमहरु, प्रभावकारी सूर्य देखि सुरक्षा, सौर ऊर्जा अवशोषित। तिनीहरूले भित्री मा burnout वस्तुहरू रोक्न, साथै सान्त्वना र इच्छित इन्डोर जलवायु थप्न।
Metallized फिलिम: प्रकार, उद्देश्य
बार्बी खेल bezdelnitsy र needlewomen लागि लुगा
घरमा मिंक टोपी कसरी सफा गर्ने? सिफारिसहरू
आफ्नो बच्चाको लागि रोचक खेलौना - छोराछोरीको ह्वीलचेयर
लुगा लागि Rivets - फैशन सहायक
कसरी वस्त्र मा दुर्गन्ध मा सेतो स्थलहरू धुन
हामी बच्चा दाँत धेरै दूध कसरी हुनुपर्छ बुझ्न
सफल मोडेल पुऱ्याउन: एक सुन्दर फोटो शूट लागि के गर्न
Valentina Telegin: जीवनी, व्यक्तिगत जीवन, परिवार, फोटो
के खाद्य पदार्थ म्याग्नेसियम समावेश र किन यसलाई नियमित तिनीहरूलाई प्रयोग गर्न महत्त्वपूर्ण छ?
कसरी विवाह फूल सही छनौट गर्न?
कसरी आफ्नो विचार व्यक्त गर्न: - विषय "डाक्टर मेरो भविष्य पेशा" मा एक निबंध
सल्लाह र सुझाव: जूता कसरी धुन
बुनना crochet शाल सिक्न
पत्रुस हेग: डेनिश लेखकको काम